Home Somali News Somaliland: Cirro Oo Ku Tagri-falay Kharashaadkii Xaqul Ciidka Shaqaalaha Golaha Wakiiladda
[quote]“Waxaanu Maqalnaa Guddoomiyahayaga oo Lacago u Qeybinaya Qoysas Dan Yar ah, Annagana Xaqul Ciidkii Ayuu Naga Goostay”[/quote]
Guddoomiyaha golaha Wakiiladda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (C/Raxmaan Cirro), ahna guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI, ayaa la sheegay in uu ku tagri falay lacag xaqul ciid ah oo shaqaalaha golahaasi la siin jiray.
Waxaana la sheegay in C/Raxmaan Cirro uu lacagtaasi uga faa’iidaystay, kuna maalgeliyay olole siyaasadeed oo uu xisbigiisa ku soo noolaynayo.
Shaqaalaha golaha ayaa lagu war-geliyay in sannadkani aan la siinaynin lacag yar oo xaqul ciid ah, taasi oo sida shaqaaluhu sheegeen markii hore la siin jiray sannad walba marka ay dhamaato bisha Ramadaan. Waxaanay sheegeen in ay aad uga xumaadeen arrintaasi.
Sida ay DAWAN u xaqiijiyeen xubno ka mid ah shaqaalaha golaha oo ka gaabsaday in magacyadoodda la shaaciyo. Waxaanay sheegeen inay ka xun yihiin inay waayaan lacagtii xaqul Ciidka ahayd oo sidii caadadda ahayd sanad kasta la siin jiray xliyadda la gaadho ciidaha.
“Waxaanu ka xun nahay in bishan Ramadaan lacagtii yarayd ee nala siin jiray, oo xaqul ciid ahayd in lanoo sheegay in aan nala siinaynin. Iyadoo la sheegay in wax lacag ahi aanay ku jirin bog xisaabeedka Golaha” sidaas waxa yidhi mid ka mid ah shaqaalahaasi oo aanu xalay wax ka waydiinay waxa ka jira arrintani.
“Waxaanu warbaahinta ka maqalnaa guddoomiyahayaga oo maalin walba lacag kharash garaynaya, oo leh waxaan afuriyay dad masaakiin iyo danyar iskugu jira, annaguna waxaanu nahay bilaa xaqul ciid oo carruurta ayaanu wax ugu iibin jirnay lacagtan xaqul ciidka ah. Balse arrintaasi waanu ka xun nahay waxaanan leenahay murtidii ahayd ninka dibbiga qalayee, ka dhergay casuumee, dibjirkiinna qadiyoow duco kuuma soo hoyan,”ayuu intaasi ku daray mid ka mid ah shaqaalle hoosaadka Golaha Wakiiladda ee Somaliland oo ka cabanayay falkaasi uu kula kacay guddoomiye Cirro.
Geesta kalena xogo wargeyska DAWAN ka helay illo xog ogaal ah, ayaa daboolka ka qaaday in Guddoomiyaha Wakiiladdu uu bilihii la soo dhaafay caseeyay kharashaadka dheeraadka ah ee loogu tallo-galay in lagu socod siiyo hawlaha aqalka Wakiiladda.
Isagoo u adeegsanaya Xoghayaha Guud ee golaha Wakiiladda Cabdirisaaq Siciid Ayaanlle, oo ka mid ah Gacan-yareyaasha xisbiga WADDANI. Waxaana la sheegay in C/raxmaan Cirro uu lacagtaasi ku galay olole lagu Dabbarayo hawlaha xisbigaasi, oo ishiisa dhaqaale ee ugu weyni ay tahay miisaaniyad sannadeedka golaha Wakiiladda.